Kenya oo diyaarado u direysa Soomaaliland | KEYDMEDIA ONLINE
Kenya oo diyaarado u direysa Soomaaliland
Dowladda Kenya ayaa u fasaxday labo diyaaradood in ay u duullaan magaalada Hargaysa, si ay u geeyaan agab loogu tala galay doorashooyinka Soomaaliland, iyadoo hore u mamnuucday safarka cirka ah ee labada waddan.
NAIROBI, Kenya - Waraaq soo baxday Khamiistii, oo tirsigeedu yahay MFA/PRO.91/002 (052), ayaa lagu sheegay in laba diyaaradood oo ay maamusho shirkadda qandaraasyada xamuulka ee Astral Aviation, loo ogolaan doono in qalab doorasho oo loo wado Soomaaliland, ay ka soo qaadaan garoonka caalamiga ah ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, siina maraan Jabuuti, si ay u gaaraan Hargeysa.
Diyaaradaha MacDonnell Douglas DCC-9F iyo Boeing B727-727F, oo labaduba ka diiwaan-gashan Kenya, ayaa loo oggolaan doonaa inay qaadaan agabka inta u dhexeysa 13-kii illaa 15-ka May.
Qoraalka ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya iyo Xafiiska Xiriirka Somaliland Khamiistii, waxaa lagu sheegay in Astral Aviation, ay heysato 72 saacadood si ay u daabusho qalabkaan, iyadoo la tix galinayo haddii dib u dhac yimaado.
Maamulka Somaliland, oo si iskood ah ugu dhawaaqay madax-bannaani, ayaa lagu wadaa inay ka billowdaan doorashooyinka dhamaadka bishaan.
Dowladda Keyna ayaa dhawaan joojisy guud ahaan diyaaradaha u kala goosha Soomaaliya iyo Kenya, Dowladda Soomaaliya, ayaana ilaa hadda ka hadal diyaaradahaan loo ogolaaday in ay u safraan Haygeysa.